Iibso Xiaomi Mi 6 ama sug OnePlus 5? | Androidsis
Xiaomi Mi 6 cusub
Xiaomi Mi 6 hadda si rasmi ah ayaa loo heli karaa oo sidaan aragnay, Qeexitaannadiisu aad ayey u fiican yihiin, oo ay ku jiraan 12 megapixel laba kamaradood leh 2X zoom optical, 6GB RAM iyo processor Snapdragon 835.
Si kastaba ha noqotee, haysashada qaar ka mid ah qaybaha ugu fiican ee warshadaha, qaar badan ayaa jira isbarbar dhiga Xiaomi Mi 6 iyo mobilada kale ee qaaliga ah sida Galaxy S8 ama iPhone 7 Plus, oo qiimahoodu ka tirsan yahay noocyo gebi ahaanba ka duwan. Sababtaas awgood iyo sababo kale oo aan hoos kaga hadli doono, cidda kaliya ee la tartameysa Xiaomi Mi 6 ayaa dhab ahaan noqon doonta midda xigta ee loo yaqaan 'OnePlus flagship', oo loo yaqaan hadda OnePlus 5.
1 Muxuu qofka kaliya ee loolanka kula jira Xiaomi Mi 6 u noqon doonaa OnePlus 5?
2 Farqiga suuragalka ah ee u dhexeeya Xiaomi Mi 6 iyo OnePlus 5
3 Taariikhda sii deynta OnePlus 5
Muxuu qofka kaliya ee loolanka kula jira Xiaomi Mi 6 u noqon doonaa OnePlus 5?
Fikradda OnePlus 5
In kasta oo Xiaomi Mi 6 uu leeyahay astaamo xitaa ka sarreeya kuwa mobilada kale ee qaaliga ah, runtu waxay tahay in mobiilku iska leeyahay a kala duwanaanta qiimaha. Waqtigaan, Xiaomi Mi 6 horeyba waa loo iibiyay oo waad ku iibsan kartaa qiyaastii 450 euro oo leh xusuus gudaha ah 64GB. Qaabka 128GB ayaa Spain ka soo iibsan kara qiimo gaaraya ilaa 500 euro. In kasta oo wax waliba jiraan, haddana tani weli waa ku saabsan tahay 200 ama 300 euro oo ka yar qiimaha Galaxy S8 ama iPhone 7 iyo 7 Plus.
Sida Xiaomi Mi 6, soo socda OnePlus 5 ayaa sidoo kale soo bandhigi doonta qaar ka mid ah astaamaha ugu wanaagsan suuqa, oo ay ku jiraan processor-ka Snapdragon 835 iyo 6GB ama xitaa 8GB oo RAM ah. Laakiin sida ugu fiican oo dhan, waa taas OnePlus 5 wuxuu adeegsan doonaa qorshe qiimeyn u eg kan Mi 6, qaar badan ayaa ku adkaan doonta inay doortaan mid ama kan kale.
Farqiga suuragalka ah ee u dhexeeya Xiaomi Mi 6 iyo OnePlus 5
Halka Xiaomi Mi 6 uu leeyahay a 5.15 inch IPS shaashadda LCD (Xalka Full HD), OnePlus 5 waxay u badan tahay inuu keeni doono shaashad AMOLED ah 5.5-inch oo leh xalka Quad HD.
Marka laga hadlayo dhanka qalabka, labada terminaal waa ay iskaga mid noqon karaan, maadaama OnePlus 5 la filayo inuu sidoo kale keeno processor-ka Snapdragon 835 iyo 6GB oo RAM ah, laakiin shirkadda Shiinaha ayaa naga yaabin doonta ku darista ilaa 8GB RAM , iyadoo la siiyay in labadii moodal ee hore, OnePlus 3 iyo 3T, ay horey u lahaayeen 6GB oo RAM ah.
Marka laga reebo cabbirka shaashadda iyo qadarka RAM, qaybaha kale ee aan ku arki karno faraqa u dhexeeya Xiaomi Mi 6 iyo OnePlus 5 ayaa noqon doona kamaradaha iyo baytariyada.
Halka Xiaomi Mi 6 uu ku faano a 12 megapixel laba kamarad ah xaga dambe, midkood wuxuu bixiyaa 2x zoom optical, OnePlus 5 wuxuu lahaan karaa kamarad 23 megapixel (dual?) Ah iyo waliba tikniyoolajiyad indha-sarcaad la'aan ah.
Dhanka batteriga, waxaa la rumeysan yahay in OnePlus 5 uu ku dari doono batari 3000mAh leh Dash Charge dhakhso ah, marka loo eego batteriga 3350mAh ee Xiaomi Mi 6.
Laakiin farqiga ugu weyn Waxaa laga yaabaa inay ku jirto qaybta shahaadooyinka, maaddaama Xiaomi Mi 6 kaliya uu leeyahay iska caabin buufin ah, halka OnePlus 5 uu keeni karo shahaadada IP68 ee iska caabbinta, taas oo kuu oggolaan doonta inaad aaladda ku quusin karto qoto dheer 1.5 mitir 30 daqiiqo.
Taariikhda sii deynta OnePlus 5
OnePlus 5 wuxuu bilaabi doonaa bilowga xagaaga, bisha Juun ama Julaay, sidaa darteed wax aad u yar ayaa haray si loo arko midka labadoodaba hogaaminaya.
Waxa si cad u cad hadda waa in Xiaomi Mi 6 uu yahay "dilaa calanka" run ah, aad uga raqiisan moobiillada kale ee dhamaadka sare leh waxqabad gaar ah ama xitaa ka sareeya.
Laakiin haddii waxa aad u baahan tahay ay yihiin qalab si isku mid ah u awood badan oo leh shaashad ballaadhan oo ka sarraysa, iyo sidoo kale shahaado IP68 ama RAM ka badan, waxa laga yaabaa inaad si fiican u sugto OnePlus 5.
Maxaad u maleyneysaa Xiaomi Mi 6 cusub? Miyaad u maleyneysaa in OnePlus 5 uu leeyahay fursad uu ku fiicnaan karo ama ku xumaan karo?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » OnePlus » Iibso Xiaomi Mi 6 ama sug OnePlus 5?
Google wuxuu ku hirgelin doonaa xayeysiiyaha xayeysiiska dhammaan noocyada Chrome